Maamulka Alshabaab ee Gedo oo Howlgalo ku qabqabtay Dad Xaaraan karinayay – SBC
Maamulka Alshabaab ee Gedo oo Howlgalo ku qabqabtay Dad Xaaraan karinayay
Maamulka Xarakada Alshabaab ee gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Baardheere ayaa howlgalo ay sameeyeen waxa ay ku soo qabqabteen dad iyagu xaaraan ku karinayay goobo ganacsi, kuwaas oo iminka ay ku xiranyihiin xabsiyada Maamulka.
Waxaa sidoo kale uu maamulku soo saara awaamiir ku aadan in aan la arki Karin goobo ganacsi oo furan xiliyada Ramadaanka ah gaar ahaan kuwa lagu kariyo cunada, cidii amarka jebisana laga qaadidoono talaabo sharci ah.
Maamulka ayaa sheegay in dadka haatan lagu soo qabqabtay dhacdooyinka xaaraan ka rinta maalintii xiliga bisha ramadaan ay ku qaadi doonaan talaabo sharciga islaamka waafaqsan saacadaha soo socda.
Dhinaca kale dagaalo maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay deegaanka Buusaar ee gobolkaasi aya ay ka hadleen maamulka xarakada Alshabaab, waxayna sheegeen in dagaaladaasi guulo wax ku ool ah ay ka soo hoyeen .
Sidoo kale waxay sheegeen in abaabulo ay wadaan islamarkaana ay gurmad xoogan uu uga yimid gobolada Baay iyo Bakool ayna mudooyinka soo socda ku rajo weyn yihiin in deegaano ka maqay gacantooda oo ka tirsan gobolka ay gacantooda dib ugu soo celin doonaan.
Sikastaba ha ahaatee dagaalada ka dhacya gobolka gedo ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay iyana ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya kuwas oo ku sugan gobolkaasi iyagoona sheegay dhankooda in ciidamada ay mudooyinka soosocda gacanta ku dhigi doonaan deegaanada ay ku suganyihiin xarakada Alshabaab ee ka tirsan gobolka Gedo.